Horudhac: Liverpool vs Burnley… (Reds oo raadinaysa inay wadada guusha dib ugu soo laabato kulanka caawa ka dhacaya Anfield) – Gool FM
(Liverpool) 21 Jan 2021. Liverpool ayaa dib u cusbooneysiin doonta raadinta guushoodii ugu horreysay ee Premier League tan iyo ka hor Kirismaska marka ay caawa garoonkooda Anfield ku soo dhaweynayaan Burnley.
Kooxda haysata horyaalka ayaa u dhacday kaalinta afaraad kaddib markii ay saddex dhibcood ka qaadatay afartii kulan ee ugu danbeysay ee ay ciyaareen, laakiin waxay noqon doonaan kuwa ugu cadcad inay ku soo laabtaan wadada guusha iyagoo ka horimaanaya koox Burnley ah oo aad ugu dhow kaalimaha loogu laabto heerka labaad ee Ingiriiska.
Daafaca dhexe ee Liverpool Joel Matip ayaa dib u bilaabay tababarka buuxa, wuxuuna ciyaari karaa markii ugu horreysay tan iyo markii uu dhaawac soo gaaray 27-kii December.
Diogo Jota lama filayo inuu ka soo laabto dhaawac jilibka ah dhowr toddobaad.
Burnley ayaa rajeynaysa inay dib u soo dhaweyso Charlie Taylor, kaasoo aan ciyaarin tan iyo guushii ay ka gaareen Sheffield United 29-kii December sababo la xiriira dhaawac muruqa ah.
Jimmy Dunne ayaa la qiimeyn doonaa dhaawaciisa fudud, halka Bailey Peacock-Farrell uu iskiis isku karaantiilay.
>- Guushii Burnley ee 2-0 oo ay ku gaartay garoonka Turf Moor sanadkii 2016-kii, waa guusha kaliya oo ay ka gaareen Liverpool 12 kulan oo ay horyaalka Premier League ku wajaheen.
>- The Clarets ayaa kaliya hal jeer guuleysatay 26-keedii kulan oo ay booqatay garoonka Anfield tartammada oo dhan.
>- Kaliya dhibcaha ay lumisay Liverpool 19 kulan oo ay garoonkeeda ku ciyaartay xilli ciyaareedkii hore waxa ay ahayd markii ay barbaro 1-1 la galeen Burnley 11 bishii July.
>- Liverpool ayaa haysata 34 dhibcood 18 kulan oo ay ciyaartay horyaalka, kala bar heerkaan oo kale xilli ciyaareedkii hore Reds waxa ay haystay 55-dhibcood, waxaana ay 13-dhibcood ku hoggaaminayeen horyaalka Premier League.
>- Waa guul la’aan afar kulan oo horyaalka Premier League, iyagoo dhaliyey hal gool guud ahaan.
>- Liverpool kulankii gool la’aanta ahaa oo ay Manchester United garoonkooda kula galeen ayaa soo gabagabeeyey 42-kulan oo horyaalka Premier League ay garoonkooda Anfield gool ku dhalinayeen.
>- Si kastaba ha ahaatee, Reds ayaan laga badinin 68 kulan oo Premier League ah oo ay ku ciyaareen gurigooda, 55 guul iyo 13 barbaro.
>- Gooldhaliyaha ugu sarreeya horyaalka Premier League ee Mohamed Salah ayaa afar kulan gool la’aan ah haatan.
>- Burnley afartii kulan ee ugu dambeysay dhammaantood waxay ku dhammaadeen 1-0, iyadoo Clarets laga badiyay saddex jeer midna ay badisay.
>- Guushii 1-0 ee Burnley ay ka gaarto Arsenal 13-kii December, waxaa goolkaas iska dhaliyay Pierre-Emerick Aubameyang, waa guushooda kaliya ee ay ku gaaraan meel bannaanka ah garoonkooda horyaalka xilli ciyaareedkan (3 barbaro, 5 Guuldarro), sidoo kale waa goolka kaliya ee ay Burnley dhalisay toddobadii kulan ee ugu dambeeyay oo ay marti ahayd.
>- Chris Wood oo leh saddex gool, waa ciyaaryahanka kaliya ee Burnley ee dhaliyay wax ka badan hal gool horyaalka heerka koowaad ee xilli ciyaareedkan.